Maxaad Ka Taqanaa Fitamiinka Laga Helo Qoraxdda? | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Miski Cabdinuur Salal — December 8, 2019
Fitamin D waxa uu ka mid yahay fitamiinada ku milmo duxda. Fitimiinadu waxaa loo qeybiyaa labbo qaybood, qayb ku milanto biyaha, waxa ayna kale yihiin fitaminadaas B iyo C jirkana waxa uu u baahanyahay si maalinla ah. Halka fitamiin D, E, A iyo K ay ku milmaan duxda jirkana waxa ay ku jiri karaan muddo 6 bilood ah.
Fitamiin D waxa uu jirka ka caawiyaa in lafaha qofka ay noqdaan kuwa caafimaad qabo oo xooggan. Waxaa muhiin ah in aan fitamiin D-ga aan u badinno dadka difaacooda liito sida: Hooyada uurka leh, ilmaha yar, iyo waayeelka.
Waa Maxay Faa’iidoyinka Ay Fitamiin D Uu Jirkeena U Leeyahay?
Waxa uu ka qeyb qaataa ka hortagga cudurada ku dhaco ciridka.
Waxa uu xoojiyaa difaaca jirka.
Waxaa uu xoojiyaa shaqada maskaxda.
Murqaha jirka waxa uu ka caawiyaa in ay noqdaan kuwa adag.
Waxa uu kor u qaadda caafimaadka ilkaha iyo lafaha.
Waxa uu caawiyaa shaqada muhiimka ah ee jirka u qabto Beerka.
Xagee Laga Helaa fitamin D?
Fitamiin D waa fitamiinka kali ah ee laga helo qoraxdda, Haa qoraxda waxaa laga helaa fitamiin D gaar ahaan xilliga subixii iyo galabki.Cunooyinka laga helo fitamiin D waxaa kamid ah:
Calaamadaha Lagu Garto Fitamiin D Marka Uu Jirka Ku Yaraado Waxaa Kamid Ah:
Qofka oo timaha ka daataan.
Murqo xanuun .
Qofka haddii dhaawac gaaro raysan waayo.
Qofka oo xanuun ka dareemo dhabarka iyo dhammaan lafaha.
Tags: Maxaad Ka Taqanaa Fitamiinka Laga Helo Qoraxdda?
Next post Fallan-qeyn: Buugga 'Dhamaadka Taariikhda iyo Ninkii Ugu Dambeeyay"!
Previous post Maxay Tahay Sababta Mooskan Loogu iibsaday $120,000 oo dollar?
Baarayaasha Maskaxda: “Daawashada Filimada Xun (porn) Waxay Xannibayaan Horumarka Maskaxda” 180 views per day | by Afrikaan.so
Wax Ka Baro Cudurkaan Dunida Saamaynta Ba’an Ka Gaystay ee Korona Fayrus *COVID-19 28 views per day | by Dr. Cabdiraxmaan Max'ed Cabdiraxmaan
Gabay Ka Hadlaaya Guusha & Socdaalka Nolosha 18 views per day | by Maxamuud Axmed Muuse
Iga Raali Noqo Qalbi 11.83 views per day | by Cabdijabaar Sh. Axmed